Imfono yeeLori eziThunyelweyo Abavelisi kunye nabaXhasi | China Mobile Led Iinkuphelostencils Ifektri
I-6m ye-LED EPHATHELELAYO ITraki-Nanjing Yue
I-JCT 22㎡ ikhokele iibhodi zebhodi yebhodi- ISUZU （Imodeli: E-YZD22） eyenziwe nguJingchuan sisiphelo sentengiso esinokuhamba ngokukhululekileyo, ukutshintsha ulwazi ngexesha elifanelekileyo, iindlela zonxibelelwano kunye neendawo. Luhlobo olutsha lokuhambisa unxibelelwano oludibanisa intengiso, ukukhutshwa kolwazi kunye nosasazo ngqo.
22㎡ IBHODI YEBHODI YETRAK-FONTON OLLIN
Kwiminyaka yakutshanje, abathengi abaninzi bamanye amazwe bafuna ukuba izithuthi zentengiso zenze imisebenzi efanayo naleyo yesithuthi sentengiso esirhuqwayo enesikrini esikhulu esinokujikeleza kwaye sisonge, kwaye bafuna isithuthi ukuba sixhotyiswe nge-chassis yamandla, efanelekileyo ukuhamba nokukhuthaza naphina
Itraki yokuthengisa eyi-E300 eyakhiwe yinkampani iTaizhou Jingchuan ikunye neFotos chassis kunye noyilo lwangaphakathi olunomxholo. Icala lelori linokwandiswa, phezulu kungaphakanyiswa, kwaye izixhobo zemultimedia zikhethwa njengokuma kwezibane, ukubonisa kwe-LED, iqonga lokumamela, ileli yeqonga, ibhokisi yamandla kunye nentengiso yomzimba weloli
I-E400 yokubonisa ilori eyakhiwe yinkampani iTaizhou Jingchuan ine-Foton chassis kunye noyilo lwangaphakathi olunomxholo. Icala lelori linokwandiswa, phezulu kungaphakanyiswa, kwaye izixhobo zemultimedia zikhethwa njengokuma kwezibane, ukubonisa kwe-LED, iqonga lokumamela, ileli yeqonga, ibhokisi yamandla kunye nentengiso yomzimba weloli
Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils, Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Inqwelo erhuqwayo, Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile,